क्रिकेट खेल्न अमेरिका जान लागेका सन्दीप लामिछानेलाई किन दिएन भिषा ?::देश र जनताप्रति समर्पित
क्रिकेट खेल्न अमेरिका जान लागेका सन्दीप लामिछानेलाई किन दिएन भिषा ?
पोखरा-सन्दीप लामिछानेको एउटा ट्वीटले अमेरिकी दुतावासलाई आफ्नै निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याएको छ। ट्वीटले तहल्का पिटेपछि दुतावास आफ्नो निर्णयबाट ४ घण्टामै युटर्न भएको हो ।
बिहान १० बजे अन्तर्वार्ताका लागि दुतावास पुगेका सन्दीपलाई भिसा दिन इन्कार गरेको थियो । त्यसपछि आफू चकित परेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित अमेरिकी राजदूत र दूतावासलाई मेन्सन गरेर ट्विट गरेका थिए ।
सन्दीपले ट्वीट गर्दै सबै कागजात समावेश गर्दागर्दै पनि आफूलाई भिसा नदिएपछि क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जान गाह्रो भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सन्दीप लामिछानेको एउटा ट्वीटले अमेरिकी दुतावासलाई आफ्नै निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याएको छ। ट्वीटले तहल्का पिटेपछि दुतावास आफ्नो निर्णयबाट ४ घण्टामै युटर्न भएको हो ।
सोसल मिडिया र संचारमाध्यमहरुमा दुतावासको विरोध हुन् थालेपछि दिउसो फेरि कार्यालयमा बोलाएर सन्दीपलाई भिसा दिएको हो ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने रहेको विमान २ घण्टा आकाशमै होल्ड,दश फन्को मारे आखिर किन ?
सन्दीप लामिछानेले किनेका नयाँ बाइक बिएमडब्लुको,यस्तो छ मुल्य र विशेषता
आईपिएलको पहिले खेलमा संदिपको सानदार शुरुवात
म्यानचेस्टर सिटी र टोट्टनहाम बराबरीमा इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको साविकको विजेता म्यानचेस्टर सिटी र टोट्टनहाम हस्टपरसँग बराबरीमा रोकिएको छ । घरेलु मैदानमा शनिबार राति भएको खेलमा सिटीले टोट्टनहामसँग २–२...
स्पेनिस ला लिगामा रियाल म्याड्रिडको सुखद सुरुवात रियाल म्याड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा सुखद सुरुवात गरेको छ । रियलले शनिबार राति भएको लिगको आफ्नो पहिलो खेलमा सेल्टा भिगोलाई ३–१ गोलले हरायो । सेल्टा...
ला लिगाको पहिलो खेलमा साविक च्याम्पियन बार्सिलोना पराजित ला लिगाको पहिलो खेलमा साविकको च्याम्पियन बार्सिलोना यस सिजनको पहिलो खेलमा पराजित भएको छ। शुक्रबार राति भएको उद्घाटन खेलमा बार्सिलोना ३८ वर्षिया अर्टिज अडुरिजको अन्तिम...